Portrait/ Toky, olon’ny tsiky sy ny hehy | Grandir à Antsirabe
Portrait/ Toky, olon’ny tsiky sy ny hehy
PORTRAIT : Nanomboka tamin’ny taona 2013 no tonga tato amin’ny Grandir à Antsirabe i Toky. Misy an’i Toky avokoa ny toerana rehetra.
Hatrany any birao amin’ny maha mpanampy amin’ny fitantanan-draharaha sy ara-bola azy. Hita miaraka lalandava amin’ny ankizy ihany ko amin’ny maha ekipa mpilatsa an-dalambe amin’ny alina azy (EMA) amin’ny « maraude » sy ny maha tompon’andraikitra ny CinéRue azy. Fiantsoantso sy fiangaviana amin’ireo asa madinidinika hafa ihany koa. Ankoatra ny sehatry ny asa dia mankafy mahandro sy mikirakira mozika ranamana.
Zarao aminay aloha Toky ny miafina ao ambadikan’izany andraikitra maro sahaninao izany ?!
Ampahany amin’ny asako ny mandoa ireo fakitora , ny mandrindra ny fandeham-bola na ihany koa mandeha any amin’ireo biraom-panjakana samihafa amin’ny fikarakarana ireo taratasy isankarazany. Somary mampivezivezy kely io andraikitra io, indraindray eto Antsirabe ihany indraindray miakatra any Antananarivo. Ankoatra izay, isaky ny alatsinainy sy ny alakamisy alina, mandeha manao « maraude » izahay ao amin’ny Ekipa Mpilatsa An-dalambe amin’ny alina (EMA) : manentana sy manao ireo kilalao iarahana amin’ny ankizin’ny lalana tsidihanay eny. Anisan’ny tena tiako io asakao io. Mbola misy ilay fanomanana ny CinéRue ihany koa, izay atao isaky ny zoma hariva. Mandefa horonan-tsary na dessin animé na horonan-tsary fanadihadihana eny an-dalana izahay.
Mahakasika an’io asa farany io ahoana no ifidiananao ny zavatra alefa ?
Afaka mijery daholo aloha na ny kely na ny lehibe. Araka izany dia mila mety ho an’ny rehetra ny zavatra alefa. Mifototra amin’ny fanabeazana sy fampialana voly hatrany ny horonan-tsary alefa. Miezaka ihany koa hoe horonan-tsary vao vaovao no ampijerena. Tiako ihany koa hoe mampahafantatra zavatra maro ho azy ireo ny horonan-tsary fidina.
Misy fotoana tokoa hono mahandro Toky…
Ie ! Alohan’ny andeha « maraude », miaraka misakafo daholo aloha ny ekipa. Matetika hoe izaho no eo alohan’ny vilany mikarakara ny nahandro. Mila atoa matsiro mba hampazoto homana ny rehetra.
Nahoana kay Toky no nisafidy hiasa ato amin’ny Grandir à Antsirabe ?
Mpametaka ireny « paraboles » ireny ny asako taloha, no sady nanao mpanentana sy DJ tamina karaoke iray. Nisy fotoana ihany koa aho nanao mpanentana ara-pananahana tamin’ny tanora ; ankoatra izay dia efa niasa tamina orina iray izay aho, mpanao pompin-drano tamina toerana misitaka an’Antsirabe, afaka nifanakalo tamin’ireo mpisitraka aho tamin’izany. Tamin’izany no nahafantarako hoe aleo miasa amina zavatra tiana sady manampy ny mpiara-belona : dia Grandir à Antsirabe tafiditra tsara ao anatin’izany !
Inona ny fahatsiarovana iray tsara indrindra ho anao tato amin’ny fikambanana?
Takariva iray izay, niarahana tamin’ny ankizy sy ny mpanabe ary ireo mpitsidika avy amin’ny Grandir Aventure. Niara-nihira sy nikalokalo teo amoron’afo izahay tamin’izay. Nisy fitonotonona hena sy masikita ihany koa. Takariva nahafahana nifanakalo sy nihomehy niaraka : tena mbola tsaroako foana !
Raha biby ianao dia ?
Boloky! satria tiako ny mampiomehy olona amin’ny famerenako ny fomba fitenenany
Hazo, ialokalofana raha sendra hain’andro. Hangalan’aina raha sendra havisanana. Iresadresahana sy ifanankalozana.
Ary raha héros ?
Kyle XY, mahay manamboatra ireo zavatra simba rehetra.
Zavatra mamy ?
Chocolat amin’ny Saint Valentin. Tonga dia mitsonika avy hatrany ao am-bava, mampatsiaro zavatra maro ny tsirony.
Toetra tsara ary e?
Tia manampy olona aho!
ary toetra ratsy ?
Tsy mahatapaka-hevitra aho, misy fisalasalana foana.
Hamaranana azy ary?
Hoy aho hoe » l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt » ! Afaka manomboka alohan’ny rehetra ianao raha mifoha maraina.
Lire aussi : Teboka Famantarana #2 : Fa maninona izy ireo no eny amin'ny lalana ?
MG	Tojo, tanoran’ny « internat » teo aloha, mpaha…
MG	Fivoahana niaraka tany Ranomafana Betafo